Usazvivaraidza nezvinhu zvakafumuka. Zvinhu zvakawanda zvinovaraidza zviri kugadzirwa mazuva ano zvinoita kuti munhu ade bonde zvisina mwero. Bhaibheri rinoti chii? “Ngatizvichenesei pazvinhu zvose zvinosvibisa nyama nomudzimu, tichikwanisa utsvene pakutya Mwari.” (2 VaKorinde 7:1) Tambira kure nevaraidzo inoita kuti ude zvebonde.